Shandong New Ankai-Kitco Sowin CNC Machine Chishandiswa Co., Ltd. munhu National yepamusorosoro zvebhizimisi kushandisa kugadzirwa CNC machine Ezvemutauro. In muuzivi "Vanhu vaifarira, Technical Innovation", kambani Hapana nokuedza chokusika "mukuru-nokukurumidza, mukuru-zvakarurama, mukuru-kuvimbika" CNC midziyo pamwe proprietary rezvedzidzo kodzero pamusaka zhinji simba zvoupfumi, simba hwokugadzira tarenda simba uye kukura mabhizimisi uzivi.
Mumakore kuedza, kambani yakabudirira dzakabudirira CNC duku nemazvo otomatiki bars lathe (soMunyengetero zvakarurama otomatiki lathe) iro rakakamurwa AK series, SM series, SX akatevedzana uye SC series, ane dzoro-chigayo mubatanidzwa nerevane kunonyanya kushanda kuti hombe-batch mangé multi-siyana mukuru-zvakarurama machine mabasa ose mutete-mugodhi uye duku zvakaoma kutenderera zvikamu. Zvigadzirwa edu yakakwirira nemazvo ukaramba mano, pamwe chikuru vachiwirirana zvikamu nemafungiro dzomunyika pezvitsiga wakakurumbira, uyewo kugadzirwa pezvakaitwa uye ruzivo vaitungamirira China. The machine psac zvigadzirwa zvinonzi nevakawanda kureva pakukurukurirana, zvokurapa michina, Refrigeration, Manyiminya zviridzwa, musha midziyo yemagetsi, Aerospace, motokari, midhudhudhu, zvemagetsi, Motors, timepiece bhizimisi uye mamwe maindasitiri.
Kubvira pakutanga kwayo, Shandong New Ankai-Kitco Sowin CNC Machine Chishandiswa Co., Ltd. yave akavakirwa tsvakurudzo, budiriro uye kugadzirwa mukuru-mugumo CNC lathes. Mumabhizimisi muuzivi "Kugara Improvement, Customer Dare", kambani Rakakwanira kuva nyika-kutungamirira midziyo mugadziri uye basa Provider.